वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज - HongKong Khabar
वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ समय: २१:४४:३८
काठमाडौँ । सेवासुविधासहित विभिन्न ५ सूत्रीय माग राख्दै धर्ना दिइरहेका वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमबीच छलफलको क्रममा आज भनाभन भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी लाठीचार्ज गरेको हो ।
विभिन्न ५ सूत्रीय मागसहित धर्ना दिइरहेका कर्मचारीसँग छलफलको क्रममा तनावपूर्णस्थिति सृजना भएपछि डा. गौतमले प्रहरी बोलाएका थिए । प्रहरीले कर्मचारीहरुलाई बैठकस्थलबाट निकाल्नका लागि बल प्रयोग गरेको थियो । सो क्रममा अस्पतालका ५ जना कर्मचारी घाइते भएका छन् । उनीहरुको अस्पतालकै इमर्जेन्सीमा उपचार भइरहेको छ ।
ुचिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी युनियनका सचिव दीपक मुडभरीले छलफलका लागि गएको बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले प्रहरी बोलाएर कुटाएको बताए । डा. गौतम भने दर्जनौं प्रहरीको घेरामा बसेर अस्पतालबाट बाहिरिएको उनको भनाई छ ।
धर्ना कार्यक्रम सोमबार पनि जारी रहने जानकारी दिए । डा. गौतमको प्रतिक्रियाका लागि गरिएको प्रयास भने सफल हुन सकेन ।
यस्तै, वीर अस्पतालको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. गौतमले फिर्ता नभएसम्म र प्रहरीले माफी नमागेसम्म कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ ।